Mudnaanta Wariye Khadar Maxamed Cakulle: W/Q: Sayid Maxamed Cumar (Darwiishka) | Haqabtire News
Mudnaanta Wariye Khadar Maxamed Cakulle: W/Q: Sayid Maxamed Cumar (Darwiishka)
Dal la dhiso waxa ka horreeya dad la dhiso. Haddii se aan dadka laga dhisin hab adeegsiga nololeed, oo aan salka hoose iyo dhidibka loo adkeyn, lagama yaabo in uu dalkaasi dhismo. Marka taas laga yimaaddo, waxa dal dhisa ama dumiya waxa ka kow ah adeegsiga saxaafadda. Saxaafaddu waa indha laga dheehdo hab-dhiska iyo horumarka dal walba. Saxaafaddu waa waxa isku xidha dalalka iyo dadweynaha adduunka ku nool. Waxaana lagu kala horreeyaa hannaanka dublimaasiyadeed ee loo adeegsado saxaafadda.
Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ka mid tahay dalalka soo koroya ee beesha caalamku ay in dhaha ku hayso. Waxayna u baahan tahay war-baahin aqoon leh oo bandhigta qaddiyadda iyo jiritaanka Somaliland. Taasina waxay u baahan tahay in ay jiraan wariyeyaal leh khibrad iyo kartidii lagu iib-geyn lahaa qarannimada Somaliland. Tv-yo badan baa waddankeenna ka jira, bal se waxa ay u muuqdaan qaar maanta ka shaqeynaya burburka Somaliland. Taasna waxa aan ku saleyn karaa in ay tahay qalad-fahanka adeegsiga dhanka saxaafadda oo marin haab ku jira. Sideedaba saddex shay ayay qalad fahmeen bulshada Reer Somaliland, kuwaas oo ah: saxaafadda, siyaasadda iyo xurriyatul-qawlka. Taasina waa halis ku soo fool leh horumarka aynnu la jecelnahay waddankeenna Hooyo!
Tv-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland SLNTV waa isha kaliya ee maanta laga dheehan karo haykalka dawlidnnimo iyo hannaanka horumarineed ee ka jira Waddankeenna. Muddo badan ayuu soo maray maraaxil kala duwan oo wakhti iyo waayaba leh. Tv-gu maadama uu yahay ishii aynu soo sheegnay waa in uu bulshada ka haqab-tiraa wax walba oo uu dadka iyo dalkuba ku badhaadhi karo, taasina waxa ay u baahan tahay in la helo masuul waayo arag ah oo aqoon durugsan u leh hab-adeegsiga iyo hannaanka saxaafadda loo maro.
Isku shaandheyntii uu Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo u sameeyay waxay ay ahayd hogol u curatay bulshada iyo war-baahinta Reer Soomaaliland. Shacabku waxa uu aad ugu riyaaqay markii Telefiishinka Qaranka Somaliland loo magacaabay maareeye in badan la naawilayay oo quluubta bulshada ka dhex guuxayay. Wariye Khadar Maxamed Cakulle in uu noqdo Maareeyaha Telefishanka Qaranka waa mid la mahadiyay, runtiina Madaxweynuhu halkaa waa uu asiibay.
Khadar Maxamed Cakulle waa ruug-caddaa in badan ku soo jiray saxaafadda kala duwan ee ku jirta deegaanada Soomaaliland. Waxa uu ka soo shaqeeyay goobo badan misana kala duwan oo saaxafadda ah. Waa wariye aad looga yaqaanno dhammaan gobollada ay soomaalidu degto. Codkiisa lab ayaa ah mid ay badanaa jecleystaan dheguhu. Erey-bixinta, hufniinka hadalka, hab-dhiska iyo hal-abbaarka tebentiisa tolmoon ayaa ah mid uu kaga duwan yahay wariyaasha dhiggiisa ah. Khadar Maxamed Cakulle waxa uu aad ugu yaqaanaa hannaanka loo qaado wareysiyada iyo habka loo diyaariyo barnaamijyada, taaso ah mid hawl badan u baahan.
Runtii warbaahintu waa arrin lagama maarmaan u ah nolosha aadamaha, wakhtiganna waxaa ba ay ka mid tahay adeegyada iyo baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada. Ninka wariyaha ahi waxa uu saxaafadda uu ugu adeegi karaa saddexda shay ee adduunka ugu qiimaha badan ee ah: horumarka dalkiisa, haqab-tirka dadkiisa iyo hiilka diintiisa. Khadar Maxamed cakulle waxa uu ka mid yahay wariyaasha sida wacan u adeegsaday saxaafadda. In badan waxa uu bulshadiisa u tebiyay arrimo aqooneed oo diin iyo maadiba ah. Waxa uu in badan wax ka diyaariyay masiibada abaaraha ee ummadeenna ku habsatay. Kolkii uu Universal ka hawl geli jiray waxaa ka diyaariyay barnaamijyo ku saabsan daruufaha abaareed iyo xaaladda nololeed ee wakhtigaas dalka ka jiray. Ta aan marnaba la illaawi doonin ee lagu xasuusan doono Wariye/Maareeye Khadar waa tan maanta jirta (abaarta), ee uu ku gaalaa bixiyay gobollada dalka ee ay abaartu ku habsatay, taas oo uu Alle iyo aadmiba kaga helay billad sharaf aan gaboobi doonin.
Dabcan anigoon ammaanayn Khadar Cakulle bal se xogta iyo xaqiiqda abbaaraya, waa nin dhaqan ahaan iyo dhalan ahaanba uu Alle wanaajiyay. Dabeecad iyo dadaalbaa dadka lagu kala jeclaada, xirfadna waa lays dheer yahay, Khadar se labadaaba waa uu isku darsaday. Wariyuhu waa indhaha iyo dareenka shacabka, sidaa la ajligeed wariyuhu waa inuu dareemi karaa daruufaha bulshada dhexdeeda ka jira. Aan tusaale yar idin siiyo:
Xuskii sannad-guuradii 24aad ee Jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland (18 May 2015), Oodweyne ayaan joogay, dabbaal-deggiina waxa nagala soo qayb-galey wafti uu ku jiro Maareeye Khadar Maxamed Cakulle. Annaga oo ah dhalliinyaro badan ayaannu Goobtii xafladdu ay ka socotay waxaanu sawirro kula galnay Khadar, isla jeerkaaba waxaa laynkii aanu sawiradda ku galeynay nala soo saftay nin xagga xuska ka xanuunsanaya. Kolkaasna badhkaayo ayaa ninkii riixay si aanu sawirka noola galin. Kaaga darane ninku waa nin deegaanka ka ah oo dhammaantayo aanu naqaanney, qaar kaayana ay iskuba dhaw yihiin ab ahaan, hase ahaatee maanu doonnay in uu sawir nala galo xitaa anigu maan dooneyn.
Haddaba Khadar markii uu arkay ninkan xuska ah iyo xaalkayagu sida uu yahay ayuu yidhi, “fadlan iska daaya sawirka ha inala galo e, sababtoo ah waa maalin farxadeed sidaa daraadeed xaq ayuu u leeyahay in uu sawirka inala galo”. Khadar waxa uu intaa sii raaciyay naguna qanciyay oo yidhi, “sawirka uu inala galo waxba inaga in yeeli maayo, balse riixista aad riixeysaan isaga wax ayay yeelaysaa. Fadlan daaya waxa laga yaabaaba in yuu yahay raggii keenay [SNM] dharaartan aynnu xuseyna e [18 May].”
Dabcan ninku wuu ahaaba SNM bal se maanu dhaaddaneyn ammintaas iyada ah! Arrintaasi waxa ay i galisay dareen aad u fog oo illaa maanta dubaaqayga ka dhex guuxaya, iina na noqday mid indhaha ii fura.
Dhab ahaan akhlaaqda iyo hab-dhaqanka wanaagsani waxa sahay goob iyo goor walba ku garab joogta oo geed kasta oo aad fadhiisato guudkaaga sudhan. Khadar Maxamed Cakulle na waa uu ku sifoobay intaas ba. Wariyihii weynaa Axmed Xasan Cawke (AHN) ayaa laga hayaa “waligay maan arag qof i neceb”. Haa, waayo waxa uu ahaa nin furfuran, aan kibir aqoon sidoo kale na murti badan. Khadar na waxa uu meelo badan ka shabbahaa Cawke oo wali maan arag qof taageera mooyee cid kale. Waxa intaas ba u dheer Khadar waa nin aragti dheer oo guurtiya, waa nin wanaaga jecel oo dadka la taliya sidoo kalena dadka waaniya oo Alle xasuusiya. Alle yaqaan ayaa aadmi yaqaan. Waa dhab midhaasi.
Muddada kooban ee Khadar uu ahaa maareeyaha waxa aad dareemaysaa durba sida uu isu beddelay Telefishankii, ee ay hawlihiisu isugu daba dhaceen, ee wax walbaaba u marayaan majarihii iyo geedi-socodkii loogu tala galay. Xaqiiqdu waxay tahay bulshada Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay wadar iyo waaxidba uga mahadcelinayaan Madaxweyne Axmed Siilaanyo magaacibtii uu jagadan u magacaabay Wariye/Maareeye Khadar Maxamed Cakulle.
Ugu dhanbeyn waxaan odhaandayda ku afmeerayaa , Mudane Khadar waa hal-door saxaafadeed ee ha lagaga daydo dhan walba iyo dhinac walba oo ah debeecad, dadaal, dulqaad iyo deggenaan.
W/Q: Sayid Maxamed Cumar (Darwiishka)